Interview with MadhavKumar Nepal | मलाई माइनस गरियो
मेचीकाली : 2014-02-27 08:58:05
आगामी महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्ष बन्ने दाउमा लागेका एमाले नेता माधवकुमार नेपाल अहिले अध्यक्ष झलनाथ खनालसँग गठवन्धन बनाउने प्रयासमा छन् । पार्टी संसदीय दलको नेताको चुनावमा खनाललाई साथ दिएका उनले अघिल्लो महाधिवेशनमा अध्यक्षमा केपी ओलीलाई साथ दिएका थिए । तर, अहिले ओलीकै विरुद्ध अध्यक्ष उठ्ने योजना बनाएका नेपाल सरकार विस्तारका विषयमा पार्टीले अस्पतालमा बैठक राखेपछि चिढिएका छन् । उनी बैठकमा समेत सहभागी भएनन् । यसै विषयमा उनीसँग गरिएको कुराकानी ।
पार्टीका पछिल्ला गतिविधिमा तपाईंको असन्तुष्टि हो ?
सरकार बन्ने प्रक्रिया सन्दर्भमा अस्पतालमा गएर बैठक बोलाउने कुरा शतप्रतिशत गलत हो । हो, पार्टीका जिम्मेवार नेता बिमारी पर्नुभएको छ भने मानवीय हिसाबले सोच्नुपर्छ । रायसल्लाह लिन मान्छे पठाउनुपर्छ तर अस्पतालमा बैठक लैजानु विचित्र हो ।
मन्त्री छान्ने क्रममा तपाईंसँग कसैले सल्लाह गरेन ?
वामदेवले गर्नुभयो । सल्लाह माग्न आउनुभएको थियो, मैले धन्यवाद भनें । म निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने र स्वामित्व लिने मान्छे हुँ । सल्लाह दिने होइन । सल्लाह त म जसलाई पनि दिन्छु । मैले अरूसँग सल्लाह लिएर आउनुहोस् अनि छलफल गरौंला भनें ।
गौतमले तपाईंसँग अरू के भन्नुभयो ?
म वामदेव कमरेडको कुराबाट सुरुमा उत्साहित थिएँ । तपाईंलाई माइनस गर्ने काम गर्दिनँ, सबैलाई समेटेर लैजान्छु भन्नुहुन्थ्यो । प्रत्यक्ष निर्वाचित र अनुभवीलाई प्राथमिकता दिने कुरा गर्नुभएको थियो । तर निर्णयमा त्यस्तो देखिएन ।
तपाईंले पनि मन्त्रीमा कोही व्यक्तिलाई अघि सार्न खोज्नुभएको थियो ?
होइन, प्रक्रियामा मेरो पहिलो आपत्ति थियो । मलाई माइनस गर्ने कारण के ? म प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे, पार्टीको उच्च ओहदामा बसेको मान्छे । कसलाई कसरी छनोट गर्ने भन्ने जान्ने मान्छे । तर किन माधव नेपाललाई सिङ्गल आउट गर्न खोजियो ? केही व्यक्तिको पूर्वाग्रहले काम गरेको छ । ती व्यक्ति र तत्त्व को-को हुन्, म पत्ता लगाउन खोज्दैछु ।